Donald Trump na Kim Jong-un agazịghị enwe nzukọ na Sịngapọ...
Onye isi ala mba Amerịka na-ewegharazị onwe ya na nzukọ ahụ Ọ dịburu na mbụ kwete n’etiti ya na onye isi ala mba Nọt Korịa. Taa bụ Tọzdee, abalị 24, nke ọnwa Mee, Trump Trump degara Kim Jong-un akwụkwọ sị na ya achọzịghị isonye na nzukọ ahụ n’ihi akparama agwa yana ụdịrị ajọ okwu si Kim Jong-un n’ọnụ apụta kemgbe abalị ole n’ole.
Gọọmenti Anambra Ga-Amachi Ndị Ọkada Ịgba n'Awka na n'Ọnisha n'Ọnwa Jụlaị...
Gọọmenti steeti Anambra ekpebiela ịmàchi ndị ji ọgba tum tum akpa ego, bụ ndị a maara dịka ndị Ọkada ka ha gharazie ịgba n'Awka na n'Ọnịsha malite n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị ahọ a bụ 2018.
Ọhaneze Ndị Igbo Akpọọla Òkù Ka A Hazigharịa Ọnọdụ Ala Nigeria...
Ndị igbo n'ụwa gbaa gburugburu na ndị ọzọ ọnọdụ ala Nigeria na-echu ụra akpọọla oku ka e nwògharịa ma hazigharịa ọnọdụ ala ahụ iji nye ya ezi ọdịnihu, kwalite ezi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọnọdụ udo, ọnọdụ mmepe, nakwa ọnọdụ egbe bere ugo bere.
Ndị Ụka Katọliki Emeela Ngagharị Udo Megide Igbusi Ndị Ụka...
Okporo ụzọ dị iche iche n'Awka bụ isi obodo steeti Anambra jupụtara nnọọ gbịm n'ọnụ ụbọchị Tuzdee dịka ndị ụka katọliki n'ala Nigeria gbaa gburugburu mere ngagharị udo, megide igbusi ndị ụka bụ nke na-arịzị ibe ya elu na mpaghara ebe dị iche iche n'ala anyị ugbu a.
Anyị Ga-Aghasà Nzukọ Igbo Ahụ A Ga-Eme n'Awka - IPOB...
Ndị otu 'Indigenous People of Biafra' (IPOB) añụọla iyi ma foro ntutu taa, sị na ha ga-aghasà ọgbakọ izugbe ndị Igbo ahụ a na-aga-achịkọba n'abalị iri abụọ na otu nke ọnwa Mee ahọ a, bụ nke ga ewere ọnọdụ n'Awka, ma kwuo na o nweghị ihe megidere ka nzukọ ahụ nwee isi, beere sọ ma eluigwe ọdara ụbọchị ahụ.
M Gaghị Esi APC Ma Ọ Bụ PDP Wee Zọọ Ọkwa Onyeisi Ala - Mọghalụ...
Osote onyeisi ụlọ ọba ego ala Nigeria n'oge gara aga, bụ Ọkammụta Kingsley Mọghalụ ekwuola hoohaa na ya agaghị esi n'otu ndọrọ ndọrọ APC ma ọ bụ PDP wee pụta ịzọ ọkwa onyeisi Nigeria na nhọpụta izugbe ahụ a ga-eme n'ahọ na-abịa abịa.
Igbusi Mmadụ: Jidenụ Gọọmenti Etiti - Igboezue...
Otu a kpọrọ Igboezuo ''International Organisation Nigeria and the Diaspora" akatọọla kpam kpam mgbusi ahụ a na-egbusisi ụmụ mmadụ na mpaghara ebe dị iche iche n'ala Nigeria ma kwuo hoohaa na gọọmenti etiti bụ ụrụhụ tarakwụ, dịka ọ na-enwewughị ike ime ihe ọbụla iji ịkwụsị mgbusi ahụ tagoro ọtụtụ ụmụafọ Nigeria aka ha dị ọcha.
E Chiela Obianọ Odozi Obodo...
Ọ bụ nnọọ ihe nnukwu ọṅụ ebe obodo jupụtakwara kpụm n'ọnụ dịka e chibere aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ oke echichi pụrụ iche dịka Odozi Obodo.
Ụbọchị Ndị Ọrụ na Mba Ụwa: Obianọ Enyela Ndị Ọrụ Ezi Olile Anya...
Dịka mba ụwa merubere mmemme ụbọchị ndị ọrụ nke ahọ 2018, aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ ekwela ndị ọrụ oyibo steeti ahụ nkwa na ihe ga-akawanyere ha mma dịka ụbọchị na-aga n'ihu.
Gọọmenti Anambra Ga-Enyocha Ọkụ Ọgbụgba Ahụ Dapụtara N'ahịa Nkwogbe...
Ọchịchị steeti Anambra ga-eguzobe kọmitii ga-eme nnyocha banyere ọkụ ọgbụgba ahụ dapụtara ụbọchị ụka gara aga n'ahịa Nkwogbe dị n'Ihiala n'okpuru ọchịchị Ihiala na steeti ahụ.
Aka na-achị mba Izrel, bụ Benjamin Netanyahu, adọọla mba Amerịka aka na ntị maka nzukọ mkparịta ụbụbọ ịkpe udo ahụ nke na-aga n’ihu ugbu a n’etiti mba ụwa na mba Iran. Mgbe ọ na-agwa ndị omebe iwu nke mba Amerịka okwu n’isi obodo mba Amerịka, bụ Wọshintin, Netanyahu kwuru n’ịkpe udo a mba ụwa na mba Iran na-akwado bụ nnukwute ịhe mmekpa ahụ nye mba Izrel.
N’agbanyeghị n’ebum n’uche ya na Barack Obama, onye isi ala Amerịka, abụghị ofu n’ihe gbasara mmekọrịta mba ụwa na mba Iran, Netanyahu kelere Obama maka nkwado ndị Amerịka na-akwado mba Izrel. Netanyahụ kwuru si na mba Amerịka na mba Izrel bụ enyi oma. Netanyahụ kọtọrọ mkparị ụbụbọ ahụ na-aga n’ihu ugbu a n’etiti Iran na mba ụwa maka ịchọta ụzọ a ga-esi eme ka Iran ghara inwete akara ngwa ogbunigwe nuklia.
Ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n’okwu n’ihe gbasara mmekọrịta mba Amerịka na mba Izrel na-ekwu na otu Netanyahụ siri bịa njem a abụghị ihe ziri ezi, n’ihi na nanị ya na ndị isi otu Rịpọblikan bụ ndị kwekọrịtaranụ. Ọtụtụ ndị otu Demokrat na-agba abụbụ, ha ekweghị aga n’ogige ebe Netanyahu kwuru okwu ahụ, nke ha na-ege ya ntị. Nke a bụ maka na Netanyahu na onye isi ndị Demokrat, bụ Obama, ejighị otu obi.
Gọọmenti Anambra Eguzobela Kọmitii Udo Maka Nsogbu Agụleri Na Ụmụeri...
N'iji weta udo tọrọ atọ na nsogbo ahụ na-adapụta n'etiti obodo Agụleri na Ụmụeri nke steeti Anambra, gọọmenti steeti ahụ eguzobela kọmittii mmadụ iri na asatọ mejupụtara iji wee leba anya na nke ahụ.
Nwada Chudie Juliet Ebuputala Akwụkwọ Ọhụụ n'Akwa...
Ọ bụ nnọọ oge nkwupuru, mwulite mmụọ na agbamume, dịka nwaafọ steeti Anambra na-ewi ewi n'edemede akwụkwọ, bụ oriakụ Chudie Juliet kpughepuru akwụkwọ ọhụụ ya, bụ nke ọ kpọrọ "The Mother's Heart Bleeds".